बाइबल अध्ययन भनेको के हो? | अक्सर सोधिने प्रश्‍नहरू
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसेकिरी इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उइघुर (सिरिलिक) उङ्गान्गेला उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उर्दू उर्होबो एडो एफिक एसान एस्टोनियन ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काजाक (अरबी) काबाइली काबीय काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंकनी (रोमन) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गालिसियन गिटोंगा गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चोल जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई दामारा नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फान्टे फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बास्क बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन बेल्जियन फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बोउलो बोस्नियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज भेजो भेन्डा मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मारी मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिङ्रेलियन मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लो जर्मन वलिसियन वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सातोमेन्सि सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
यहोवाका साक्षीहरू मानिसहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राख्छन्‌। त्यस्तो अध्ययनमा थुप्रै प्रश्‍नको जवाफ दिइन्छ। जस्तै:
के परमेश्‍वर साँच्चै मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ?
मेरो वैवाहिक जीवन कसरी अझै आनन्दित हुन सक्छ?
म कसरी आनन्दित हुन सक्छु?
हामीले सञ्चालन गर्ने बाइबल अध्ययनबारे अक्सर सोधिने केही प्रश्‍नका जवाफ तल दिइएका छन्‌:
बाइबल अध्ययन कसरी सञ्चालन गरिन्छ? हामी कुनै एउटा विषय रोज्छौं, जस्तै “परमेश्‍वर” वा “वैवाहिक जीवन।” अनि त्यस विषयसित सम्बन्धित थुप्रै बाइबल पदहरू केलाउँछौं। ती पदहरू तुलना गरेर हेरेपछि बाइबलले त्यस विषयमा के सिकाउँदो रहेछ भनेर थाह हुन्छ। यसरी हामी बाइबलको कुनै एउटा विषयलाई राम्रोसँग बुझ्न त्यसैसित सम्बन्धित अरू बाइबल पदहरू केलाउँछौं।
बाइबल अध्ययन गर्न सजिलो होस्‌ भनेर हामी बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ? किताब प्रयोग गर्छौं। यस किताबमा परमेश्‍वर, येशू र हाम्रो भविष्यजस्ता विषयलगायत अरू थुप्रै विषयबारे बाइबलले के सिकाउँछ भनेर स्पष्टसित बताइएको छ।
बाइबल अध्ययन गर्न पैसा तिर्नुपर्छ? पर्दैन। अध्ययन गरिने प्रकाशनहरूको पनि पैसा लिइँदैन।
अध्ययन कति लामो हुन्छ? थुप्रैले हामीसित बाइबल अध्ययन गर्न हप्ताको एक घण्टा जति समय निकाल्ने गर्छन्‌। तर यति नै हुनुपर्छ भन्‍ने नियम छैन। तपाईंको अवस्थाअनुसार अध्ययनको समय छाँटकाँट गर्न सकिन्छ।
मैले बाइबल अध्ययनको लागि अनुरोध गरेपछि के हुन्छ? तपाईंले बाइबल अध्ययनको लागि अनुरोध गरेपछि तपाईंलाई पायक पर्ने समयमा र पायक पर्ने ठाउँमा एक जना यहोवाको साक्षी तपाईंलाई भेट्‌न आउनेछन्‌। हामी कसरी बाइबल अध्ययन गराउँछौं भनेर तिनले तपाईंलाई केही मिनेटमै देखाउनेछन्‌। तपाईंलाई मनपऱ्‍यो भने त्यसरी नै अध्ययन गरिरहन सक्नुहुन्छ।
मैले बाइबल अध्ययनको प्रस्ताव स्वीकारें भने के म यहोवाको साक्षी बन्‍नै पर्छ? पर्दैन। यहोवाका साक्षीहरू अरूलाई बाइबलबारे सिकाउन पाउँदा औधी खुसी हुन्छन्‌ तर हामी अरूलाई कहिल्यै पनि हाम्रो धर्ममा आउन दबाब दिंदैनौं। बरु हामी बाइबलले के सिकाउँछ, त्यो मात्र बताउँछौं। कुनै कुरामा विश्‍वास गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सबैसित छ। त्यस्तो अधिकारको हामी कदर गर्छौं।—१ पत्रुस ३:१५.
सधैँभरि जीवनको आनन्द उठाउनुहोस्‌!—बाइबल अध्ययन सामग्रीको परिचय
यो पुस्तिका हाम्रो निश्‍शुल्क बाइबल अध्ययन कार्यक्रमअन्तर्गत बाइबल अध्ययन कसरी गरिन्छ भनेर देखाउन तयार पारिएको हो।
बाइबलको कुनै विषयबारे यहोवाका साक्षीहरूसित भेटेर छलफल गर्नुहोस्‌ वा निश्‍शुल्क बाइबल अध्ययन कसरी गरिन्छ भनी जान्‍नुहोस्‌।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने बाइबल अध्ययन भनेको के हो?
ijwfq लेख १५
यदि मैले यहोवाका साक्षीसित बाइबल अध्ययन गरेँ भने के म पनि यहोवाको साक्षी बन्‍नुपर्छ?